America Inoti VaMnangagwa Ngavaite Zvavari Kutaura Kwete Kuperera Mukutaura Chete
Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica anoti kunyange hazvo mutungamiri weZimbabwe, VaEmmerson Mnangagwa, vari kutaura mashoko akanaka nekuvimbisa kuita zvakanaka, zvakakosha kuti vachitanga kuita zvavari kuvimbisa kuitira kuti vakwanise kudyidzana nekugara nenyika dzepasi rese zvakanaka.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, Ambassador Matthew T Harrington, vataura mashoko aya vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau vemuAfrica pachiitiko chekupa mubairo kumakambani akabudirira mumabhizimisi eAwards for Corporate Excellence.
VaHarrington vati nyika dzese pasi rose, kusanganisira America, dzakatarisa Zimbabwe nemaziso matsvuku zvichitevera kushanduka kwakaita hurumende muZimbabwe.
Vati Zimbabwe ine mukana mukuru wekuchinja gwara rayaifamba naro mumakore makumi matatu apfuura.
Vati America inotarisira kudyidzana neZimbabwe zvekare sezvavaita kare.
Vati kunyange hazvo VaMnangagwa vari kutaura mashoko akanaka chinokosheswa nenyika yavo kuita zvinhu izvi kwete kungotaura chete.
Ambassador Harrington vati panodiwa kushanduka munyaya dzehupfumu nematongerwo enyika kuti America nenyika dzepasi rose dzigutsikane nekutanga kudyidzana neZimbabwe zvakare.
Hurumende yaVaMnangagwa inoti inoda kugadzirisa hukama hwayo nenyika dzepasi rese.
Nemusi weMumvuro, gurukota rezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, vakaparura hurongwa hwekugadzirisa hupfumi hwenyika pamwe nekuti nyika ichabhadhara zvikwereti zvayo sei kumabhanga epasi rese akaita seWorld Bank, African Development Bank nemamwe.
Vakatiwo vachatauririrana nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vatange kudzidzana nadzo zvekare.
Kusabhadhara zvikwereti ndezvimwe zvange zvave kuita kuti Zimbabwe isemwe nenyika dzepasi rese.